Warbixin ku saabsan covid-19 ee degmada Stavanger | City of Stavanger
Warbixin ku saabsan covid-19 ee degmada Stavanger
Macluumaad soomaali ah oo ku saabsan koroonada Noorway
Macluumaad soomaali ah oo ka socda dawladda Noorway oo ku saabsan xeerar, talooyin iyo soo-jeedinno khuseeya xaaladda koroonada ee ka jirta Noorway.
Informasjon om covid-19 i Stavanger kommune – Norsk bokmål
Koronawirus: Ważna informacja – polski
معلومات حول كوفيد-19 في بلدية إستفانغر – العربية
Informacija apie Covid-19 Stavanger savivaldybėje – lietuvių
Informaţii privind covid-19 în Stavanger – română (România)
اطلاعات در مورد کووید ـ ۱۹ در کمون یا شهرداری ستاوانگر – درى
Tallaalka Corona ee Stavanger
Dawladda Hoose ee Stavanger ayaa hadda ku tallaalaysa dadka deegaanka ah ee u dhexeeya 18 iyo 65 jir xarunta tallaalka Forum Expo ee ku taala Tjensvoll. Degmadu waxay u dirtay SMS qof kasta oo ka tirsan kooxdan kuna wargelisay inay is diiwaangaliyaan .
Haddii aadan helin SMS ama aadan ku soo galin karayn qaab elektaroonig ah (påligging), soo wac 51 50 72 20 Isniinta-Jimcaha at30-15.00.Halkaas waxaad ka helaysaa caawimaad.
Haddii aadan rabin tallaal, uma baahnid in aad wax samayso .
Haddii aad aqbasho tallaalka, waxaad ka heli doontaa SMS degmada Stavanger oo ku saabsan tallaalka lagu siinaayo.Aad ama riix meesha SMS-ga ku qoran (Lenken) oo ballan kasamayso.
Waxay qaadan kartaa waqti dheer laga bilaabo waqtiga aad is diiwaangeliso ilaa in aad helayso dalabka lagu siinaayo.Waxay ku xiran tahay inta talaal ee ay degmadu hesho.
Markii laguu ballansado, waa inaad ku soo qaadataa tallaalka xarunta tallaalka ee Forum Expo ee Tjensvoll.Dadka degan Rennesøy iyo Finnøy sidoo kale waxay heli doonaan dalabyada talaalka gudaha Mastrahallen iyo hoolka dad badan isticmaalaan ( Finnøy Fleirbrukshall) .
Haka soo hormarin wakhtigaXakamaynta caabuqa awgood, tirada dadka ee hoolka isla joogi kara waa la yareeyay ama xadiday.Xusuusnow af xidhka (munnbind)!
Soo qaado kaarka aqoonsiga oo leh sawir , is diiwaangelin markaad timaado hoolka lagaa tallaalayo .
Soo xidho dhar nafis ah, jidhka xagiiisa sare oo si fudud gacmaha loo laalaabi karo marka tallaalaka lagu mudaayo .
Tallaalka ka dib, waa inaad joogtaa qolka sugitaanka ee hoolka ugu yaraan 20 daqiiqo haddii ay dhacdo inay ka yimaado fal-celin xasaasiyad ah.Tani waa nidaamka caadiga ah oo loo qorsheeyay tallaalka .
Tallaalka Coronaha wuxuu ka kooban yahay laba qiyaasood (doser) inta badan, waxaa loo dhexaysiiyaa dhowrkii wiik .
Waxaad heli doontaa SMS lagu yeedhaayo marka lagu siinaayo qaybta 2 aad, waxyar ka dib markaad qaadato qaybta 1 aad .
Waxyeelo kaama soo gaadhaso qaadasha tallaalka.Waxa jirta fursad aad uga weyn inaad si daran uga bukooto fayraska 'coronavirus' marka la barbardhigo waxyeelada tallaalka keeni karo .
Talaalada badankood waxay keenaan waxoogaa xanuun ah meesha gacanta ee tallaalka laga siinayo.Waxaa kugu dhici karta madax xanuun yar, qandho waxaadna dareemi kartaa jirro.Tani waxay ka dhigan tahay in tallaalku shaqeynayo .
Xitaa haddii lagaa tallaalay, weli waa inaad u hoggaansantaa xeerarka xakameynta infekshinka (smittevernreglene).Ma jiro tallaal boqolkiiba boqol waxtar leh (prosent effektiv) .
Talaalka ka hortaga coronaha
Dowladda hoose ee Stavanger ayaa u soo bandhigi doonta dadka degan degmada tallaalka coronaha.
Muhiim ma aha inaad la xidhiidho degmada ama dhakhtarkaaga gaarka ah (fastlegen) si aad isu diiwaan geliso ama aad isugu qorto liiska sugitaanka (venteliste) .
Waa lagula soo xidhiidhi doonaa ama waxaa lagu siin doonaa ogeysiis markay soo dhawaato wakhtiga lagu talaalaayo.
Tallaalku coronaha wuxuu qayb ka yahay barnaamijka tallaalka xadidan (rammet).
Talaalku waa lacag la'aan, waana ikhtiyaarkaaga (frivillig).
Maaddaama uu cudur yahay cudur aad u faafa, qof kasta oo kara waxaa lagula talinayaa in uu qaato tallaalka.
Tallaalka waxaa loo bixiyaa laba jeer oo la qaadanaayo wiqiyad (doser), oo u dhexeysa dhowr toddobaad.
Tallaalka laguma talinayo carruurta iyo dhallinyarada ka yar 18 sano ama haweenka uurka leh
Tallaalka Stavanger waa saddex weji
Wajiga 1:Dadka deggan da'da weyn iyo guryaha waayeelka waxaa lagu tallaalayaa xarunmahooga (institusjonen) toddobaadyada 1-7.
Wajiga 2aad:Kooxaha mudnaanta leh (dadweynaha ka weyn da'da 65 iyo kuwa qaba cudurrada aan guurin (underliggende)) waxaa ku tallaalaya dhakhtarkaaga gaarka ah laga bilaabo toddobaadka 4aad iyo wixii ka dambeeya.o dhakhtarkaaga gaarka ah waxay wacaan bukaanada jira 85 sano iyo wixii ka weyn.o Bukaanada kale waxay helayaan wicitaan taleefon ama si kale ayaa dhakhtarkaaga gaarka ah ugu wargaliyaa markay tahay markoodao Sidoo kale raac bogga internetka ee dhakhtarkaaga gaarka ah wixii macluumaad ah ee ku saabsan talaalada.
Wajiga 3:tallaalka ballaadhan ee dadka intiisa kale (18-64 sano).o Wakhtiga la bilaabayaa waxay u badan tahay inay dhacdo wakhtiga Easter-ka (påske), iyadoo ku xidhan helitaanka tallaalka. Kala soco bogga degmada wixii macluumaad ah ee ku saabsan bilowga.
Haddii aadan dhakhtarkaaga gaarka ah ku lahayn Stavanger ama aad si ku meelgaadha ah u joogto degmada:
Haddii aad ku jirto koox mudnaan leh, wac xafiiska tallaalka 51 91 33 33 waxaana laguu gelin doonaa liiska iyada oo lakula soo xidhiidhi doonaa marka ay gaadho xilligaaga. Haddii aadan ku jirin kooxda mudnaanta leh, waxaa lagu tallaalayaa marka dadka intiisa kale la tallaalayo (massevaksinasjon). Kala soco bogga degmada wixii macluumaad ah ee ku saabsan bilowga.
Talooyinka qaranka iyo tilmaamaha
Ku socota qofka loo sheegay in uu galo karantiimo ama gooni-u-bax guriga ah
Warbixin loogu talagalay qofka laga qaaday shaybaarrada dhiigga
Waa goorma goorta la rabo in dhallinyarada iyo dadka waawayn ay guryahooda iska joogaan, oona aynan aadin iskuullada/ goobaha shaqada, lana rabo in ay sameeyaan shaybaar [covid-19]?
Goorma ayaa la rabaa in carruurta xanuunsanaysa lagu hayo guriga oo aanay tegin xannaanada iyo iskuulka carruurta?
Soo gelitaanka Norway – xeerarka karantiilka iyo baaritaanka
Talo ku socota dadka khatarta ugu jira inay cudur xun ka qaadaan COVID19